Bilaogy Clip-In Hair Extensions ho an'ny Hair Hair
Default manavakaSort ny lazanySort by eo ho eo RatingSoraty amin'ny faranySort by Price: ambany ny ambonySort by Price: ambony ny ambany
Asehoy ny 12 amin'ny pejyAsehoy ny 24 amin'ny pejyAsehoy ny 48 amin'ny pejy
Ny tsara indrindra amin'ny Clip Ins for Hair Natural
Ny Hair Extensions Hair Natural dia manome ny Premium Clip Ins ho an'ny Sista rehetra mila fanampiana! Manana fitoeran-tranonay izahay, izay raketakay amin'ny rindrankajy mba hampifanaraka ny tontolon'ny 3a ny rehetra dia ny 4c. Manana fanangonan-dahatsary ho an'ireo izay mandalo aza izahay ary ho an'ireo vehivavy manana perm) koa!
Volombava volombava Natural Manorata fomba amam-panao tsara indrindra. Azonao atao ny mitondra azy ireo misambotra ho an'ny pôtisia avo, ny antsasaky ny antsasany, miaraka amin'ny ampahany, ary mihoatra lavitra noho izany.
Ny clip-ins dia manolotra ny fahaiza-manao manintona indrindra. Ny fomba ahafahanao mandray anjara sy manamboatra ny volonao dia tsy misy farany. Ny clip-ins dia mamela ny volonao ho ela kokoa sy maivana ary tsy maintsy mandany ora ao amin'ny salon-volo.
Ny horonantsary misy antsika dia avy amin'ny 10 "mankany 24" na izany aza ny fomba amam-panao ny baiko ho an'ny 30 ".
Ny fonosana voajanahary ao anaty fonosana dia hampitombo ny volonao! Izany dia tonga lafatra ho an'ireo izay vao nanao ny BIG CHOP na ho an'ireo divas izay te hanampy kely sy lava volo ho an'ny volony. Amin'ny alàlan'ny horonantsary voajanahary ao anaty vondrona, azonao atao ny tanjona volo ao anatin'ny fe-potoana 10!